रामकुमारको रामलीला : मै खाम, मै लाम, स्वास्थ्यको बजेट झ्वाम - Tesro Ankha
छापडाँडा (दुर्छिम), खोटाङ
सित्तैमा पाउँदा अलकत्र चपाए पनि गुन्द्रुकको झोलमा इज्जत फाल्नुपर्ला भनेर हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक रामकुमार भगतले कहिल्यै सोचेका थिएनन् । दस मनमा एक मनले पनि त्यस्तो नसोचेका उनले अन्ततः सित्तैमा पाएको अलकत्र चपाउँदा गुन्द्रुकको झोलमा इज्जत फालेरै छाडे ।
पैसा देख्दा महादेवको त तीन नेत्र हुन्छ भने दुई नेत्र भएका सामान्य मानिसलाई त्यस्तो लाग्नु अस्वाभाविक होइन । त्यस्तो लाग्यो भन्दैमा मनपरी गर्न कहाँ पाइन्छ र ? स्वास्थ्य संयोजक भगतलाई भुँइको टिप्दा गोजीको पोखिन्छ भनेर थाहा नभएको बुझिन्छ ।
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यक्रमको बजेटमा उनले व्यापक अनियमितता गरेका छन् । वार्षिक स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा छुट्ट्याइएको बजेटमध्ये उनले कतिपय त शीर्षकअनुसार खर्च नगरी कुम्ल्याएको नगरका स्वास्थ्यका कर्मचारीबीच कानेखुसी र तीव्र आलोचना हुने गरेको छ ।
समाचार स्रोतको उत्तरमा भगतको भनाइ छ, ‘युनिसेफबाट आउने भनेको बजेट समयमै आएन । ढिलोगरी आएको बजेट नगरमार्फत युनिसेफलाई नै फिर्ता गरिएको हो । त्यही भएर हिसाब–किताब नमिलेको हुनुपर्छ ।’
यसैगरी, निःसर्ततर्फ ३८ लाख २७ हजार ५ सय १२ कुल खर्च भनी फछ्र्यौट गरिएको छ । तर, ३४ लाख ५५ हजार १ सय १४ रुपैयाँमात्रै वास्तविक खर्च भएको थियो । बाँकी ३ लाख ७२ हजार ३ सय ९८ रुपैयाँको हिसाब–किताब देखाउनुपर्छ कि पर्दैन ?
समाचार स्रोतको प्रश्नको उत्तर दिँदै भगत भन्छन् ‘यो आरोपमात्रै हो । कार्यक्रम नगरी बजेट फछ्र्यौट गरेको छैन ।’ आरोप प्रमाणित भयो भने नि ? उनले हाकाहाकी थपे, ‘नेपाल सरकारले तोकेको सजायँ भोग्छु ।’
क्षयरोगसम्बन्धी समीक्षा (कोर्हत) का लागि छुट्ट्याइएको रकममा २० हजारभन्दा बढी हिनामिना भएको प्रस्ट छ । त्यतिमात्रै होइन, स्वास्थ्य संयोजक भगतले कार्यक्रम नै नगरी विभिन्न शीर्षकको बजेट निकासा गर्न सफल भएका छन् । कसको आडमा उनले यसो गरिरहेका छन् ? एक दिन खुलासा हुने नै छ ।
(२) स्वास्थ्य प्रवद्र्धन– मेरो वर्ष अभियान, महामारी, सर्ने नसर्ने रोगथाम, प्रजनन तथा बालवातावरणसम्बन्धी ९७ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ निकासा भएकोमा नागरिक बडापत्र १ हजारको दरले तेह्रवटाको १३ हजार, निःशुल्क औषधि नामावलीमा एक हजारको दरले तेह्रवटाको १३ हजार, कार्यालय स्टाम्प २५ वटा ५ सयको दरले १२ हजार ५ सय, स्वास्थ्य चौकी होर्डिङ बोर्ड तेह्रवटा एक हजारको दरले १३ हजार गरी जम्मा खर्च ५२ हजार । ४५ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ हिनामिना ।
(३) पूर्ण खोप नगरपालिका सुनिश्चित र दिगोपना सूक्ष्म योजना अध्यावधिका लागि खोप समन्वय समिति स्वास्थ्य संस्था प्रमुखसहित, नगर प्रमुख तथा वडाध्यक्ष र सरोकारवालाको एकदिने गोष्ठीका लागि छुट्टिएको रकम ६९ हजार ४ सय ८० रुपैयाँमध्ये कार्यक्रममा माला ६ हजार, प्रशंसापत्र १३ वटाको ५ सयका दरले ६ हजार ५ सय, प्रशंसापत्र दुईवटा १ हजारको दरले २ हजार, कार्यक्रमको ब्यानर १ हजार गरी वास्तविक खर्च १५ हजार ५ सय भएको । बाँकी ५३ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ खोजी गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? उक्त कार्यक्रममा ४६ जना सहभागी थिएनन् । ३४ जनामात्रै सहभागी । स्वास्थ्य संयोजक भगतले सम्पूर्ण वडाध्यक्षलाई कार्यक्रमबारे जानकारी गराएकै थिएनन् ।
(४) पहँुच नपुगेका छुट बच्चाको खोजी तथा पूर्ण खोप दिलाउन महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई अभिमुखी तथा योजना निर्माण (मंगलटार, बाहुनीडाँडा, बडहरे, डिकुवा) मा जम्मा ४८ जना स्वयम्सेविकाको भत्ता ४ सयको दरले १९ हजार २ सय, स्टेसनरी २ हजार ४ सय, खाजा ९ हजार, प्रशिक्षक भत्ता १२ हजार ७ सय गरी जम्मा खर्च ४३ हजार २ सय । सो कार्यक्रमका लागि ९३ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ छुट्टिएको । त्यसो भए ५० हजार ४ सय ४० रुपैयाँ हिनामिना हुँदा किने कोही बोल्दैनन् ?
(६) गर्भवती, सुत्केरी महिला, बालबालिका तथा किशोरकिशोरी लक्षित पोषण प्रवद्र्धन कार्यक्रम (पोषण नाङ्लो प्रवद्र्धनसमेत) र विद्यालय जाने तथा नजाने किशोरकिशोरी लक्षित पोषणयुक्त खाद्यवस्तु प्रवद्र्धनका लागि छुट्टिएको रकम १ लाख ९० हजार ४ सय ५० मध्ये खर्चभत्ता १२८ जनालाई ४ सयको दरले ६ हजार ४ सय, नाङ्लो प्रवद्र्धन ५१ हजार २ सय, स्टेसनरी ६ हजार ४ सय, प्रशिक्षक भत्ता १६ हजार ५ सय, सहायक प्रशिक्षक भत्ता ७ हजार ७ सय, कास भत्ता १ हजार ६ सय ५० गरी १ लाख ७१ हजार ७ सय खर्च भएको । बाँकी रहेको १८ हजार ८ सय ५० रुपैयाँको हिसाबकिताब छँदै छैन ।
(७) पालिका खोप ऐन नियम खोप कार्यक्रमको समीक्षा कार्यक्रमका लागि ८० हजार छुट्ट्याइएको । त्यसमध्ये भत्तामा १४ हजार २ सय ८०, खाजा ३ हजार ७ सय, स्टेसनरी १ हजार २ सय गरी १९ हजार ८० खर्च भएको । बाँकी ६० हजार ९ सय २० रुपैयाँ हिनामिना ।
(१०) स्वास्थ्यचौकीस्तरमा औजार उपकरण, फर्निचर साथै स्वास्थ्य संस्था मर्मतका लागि १ लाख छुट्ट्याइएको । ६७ हजार ८० रुपैयाँमात्र खर्च । बाँकी ३२ हजार ९ सय २० रुपैयाँको हिसाबकिताब राख्नुपर्छ कि नाइँ ?
(१४) आमा सुरक्षा कार्यक्रम न्यानो झोला खरिदमा ५० हजारभन्दा बढी आर्थिक घोटाला । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक रामकुमार भगतले गरेको प्रतिनिधिमूलक अनियमिततामात्रै उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य संयोजक भगतले मनपरेकालाई काखा र मन नपरेकालाई पाखा पु¥याएको भगतपीडित मुख खोल्न थालेका छन् । हलेसी आएदेखि रामकुमारको रामलीला (आर्थिक अनियमितता) र कृष्णलीलाको चर्चा गरिसाध्ये छैन । उनको कुकृत्यबारे तुवाचुङ साप्ताहिकले शृंखलाबद्ध प्रकाशित गर्दै जानेछ ।
मैले गल्ती गरेको प्रमाणित भए स्थानीय र संघीय सरकारले तोकेको भोग्न तयार छु ।
२०७६ भाद्र २३ १६:२१